Google Analytics inogadziridzwa nesarudzo dzekugovana | IPhone nhau
Google Analytics inogadziridzwa nesarudzo dzekugovana
Iyo Mountain View-yakavakirwa sosi huru sosi yemari kushambadzira. Kana iwe wakambove nekudiwa kwekugadzira mushambadziro wekushambadza paGoogle, zvirokwazvo unoziva Google Analytics. Google Analytics ndiyo sevhisi yeGoogle iyo inotibvumira kuti tigadzire mishandirapamwe yekushambadzira uye tinoitarisa zvinoenderana nezvatinoda, kungave kune vadiki kana vakuru vateereri, kune imwe nzvimbo yenzvimbo kana imwe, mukuwedzera pakukwanisa kuigadzira kuitira kuti mushandirapamwe uratidzwe chete panguva yakatarwa uye chete pamazuva evhiki atiri kuda.
Makambani makuru e tech vari kuwedzera masevhisi avo kune mamwe masisitimu anoshanda akasiyana neako. Pasina kuenda kumberi Apple Music inowanikwa pane Android uye sekureva kwaCook haizove iko chete kunyorera kuchasvika kune inokwikwidzana ecosystem. Parizvino Microsoft inotipa muApp Store zvese zvishandiso zvinoumba hofisi yayo suite, kuwedzera kune mamwe maapplication ayo aakatenga zvakajeka kuti atakurwe nemapuratifomu anokwikwidza akadai seIOS neApple, achisiya padivi Windows Mobile chikuva.
Google, seApple neMicrosoft, inoda kupa masevhisi ayo ese kune yakanyanya nhamba yevashandisi / vatengi uye seuchapupu hweizvi isu tine huwandu hukuru hwezvikumbiro zvatinogona kuwana kubva kune uyu mugadziri muApp Store. Kana tikatsvaga mugadziri muApp Store tinogona ona kuti zvakangonaka sei kubva kuGoogle, kune zvinopfuura makumi mashanu zvekushandisa.
Yekupedzisira kunyorera iyo Google yakagadziridza iGoogle Analytics, application inotibvumidza gadzirisa nguva dzese mishandirapamwe yatakawana neGoogle. Mushure mekuvandudzwa kwekupedzisira, Google yakawedzera mabasa matsva seayo anotibvumidza kugovana neemail, SMS, mameseji ekushandisa ... iyo mishumo yatinoburitsa kubva kumakampeni edu. Tinogona zvakare kugadzira misika inogadziriswa uye chengetedza nzira ipfupi pane desktop desktop. Mukuwedzera kune zvimwe zvinhu zvitsva, Google yakagadziridza mashandiro uye kufamba kwechishandiso.
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » IPhone maapplication » Google Analytics inogadziridzwa nesarudzo dzekugovana
Apple, Google neMicrosoft Shambadza Vhura Tsamba Inoti Anti-Encryption Mutemo "Unworkable"
iOS 9 yatove pa84% yemidziyo inoenderana